युटुबर माथि नायिका पुजाको आक्रोश कि प्रस्न: मेरो नाम नलिइ खाना पच्दैन हो युट्युबर ? - Reel Mandu
युटुबर माथि नायिका पुजाको आक्रोश कि प्रस्न: मेरो नाम नलिइ खाना पच्दैन हो युट्युबर ?
इटहरी/ नेपाली चलचित्र उधोगमा अभिनेत्रीहरुको धेरै चर्चा हुने गर्छ । अभिनयको चर्चा भन्दा पनि उनिहरुको अनेक गतिविधि र हर्कतका कुराहरुले मिडिया र सामाजिक संजाल तातिन्छ ।
यतिबेला प्रायः अभिनेत्रीहरु शान्त छन् वा भनौ आफ्नै घरायसी काममै ब्यस्त छन, कारण चलचित्र क्षेत्रमा अझै पनि काम गर्ने सहज वातावरण बनिसकेको छैन । तर, अभिनेत्री पुजा शर्मा भने चर्चा र आलोचनाबाट बाहिरिन सकेकी छैनन् ।
जे होस्, सुदर्शन संग प्रेमका कारण नाम जोडिएपछि विवाह हुने सम्मको चर्चा चलेको थियो । तर, कथाले नया मोड लिएपछि पुजाको मिल्ने साथीको रुपमा रहेकी वर्षा सिवाकोटीसंग पनि पानी बाराबारको चर्चा छ ।
सुदर्शनको इङेजमेन्टमा वर्षा सिवाकोटी र राज कट्वाल पनि पुगेका थिए । त्यसैले पनि पुजा छुटिन् भन्ने हल्ला चलेको छ । पुजा भने यतिबेला युद्ध बानियाँसंग प्रेममा रहेको चर्चा छ । यी २ घुमघाममा पनि निस्कीरहेको बुझ्न सकिन्छ । एक अन्तरबार्तामा यी २ को प्रेमका बारे प्रश्न गर्दा शर्माले कुरा टारेकी छन् । जसका कारण पनि प्रेममा छिन् भन्न सकिन्छ ।